Munyori weBazi reMigodhi Anomira Pamberi peKomiti yeParamende
Kurume 16, 2010
Izvi zvaitwa veruzhinji vasingaone zviri kuitika. Va Musukutwa naVa Obert Mpofu, gurukota remigodhi nevakuru vemakambani e Mbada Holdings ne Canadile ayo ari kuchera mangoda kwaMarange vava nemasvondo vachiramba kumira pamberi pedare kupindura mibvunzo pamusoro penyaya yanetsa yema ngoda munyika.
Munyori mubazi rezvemigodhi, Va Thankful Musukutwa, vamiswa neChipiri pamberi pekomiti yeparamende inoona nezvemigodhi vachibvunzurudzwa masarudzirwe akaitwa makambani ari kuchera mangoda kwaMarange kuManicaland.
Izvi zvaitwa veruzhinji vasingaone zviri kuitika. Va Musukutwa, gurukota remigodhi, naVa Obert Mpofu, pamwe nevakuru vemakambani eMbada Holdings ne Canadile, ayo ari kuchera mangoda kwaMarange, vava nemasvondo vachiramba kumira pamberi pekomiti yeparamende.
Komiti iyi iri kuda kuti vapindure mibvunzo pamusoro penyaya yanetsa yemangoda munyika.
VaMusukutwa vanonzi vaudzwa nemuchuchusi mukuru wenyika kuti vakaramba kunomira pamberi pedare reparamende vanozosungwa nemutemo. Mashoko aya atsigirwa nemunyori wedare, Va Austin Zvoma, avo vanonzi vaudzawo Va Musukutwa kuti vanosungirwa nemutemo kunomira pamberi pekomiti iyi vachipindura mibvunzo.
Komiti yeparamende iri kuda kuongorora mafambisirwo ari kuitwa mangoda ekwaMarange, kuitira kuti pave negwara rakajeka rinofanirwa kutevedzerwa kuitira kuti nyika iwane zvine pundutso kubva pamangoda aya.
Va Moses Mare inhengo yekomiti yeparamende iri kunzwa nyaya yemangoda ekwaChiadzwa. VaMare vanoti komiti yavo kunyange ichabvunzurudza vamwe vanhu pasina veruzhinji, hazvirevi kuti ichambunyikidzwa kuti itadze kutarisisa zviri kuitika kwaMarange.
Nyanzvi munyaya dzemitemo nekodzero dzevanhu dzinotiwo manzwirwo ava kuitwa nyaya yemangoda nekomiti yeparamende, anogona kuti veruzhinji varasikirwe neruzivo rwechokwadi pane zviri kuitika.
Va Dewa Mavhinga vanoshanda neHuman Rights Watch, uye vari kutevera zvikuru zviri kuitika pamangoda ekwaMarange. VaMavhinga vati komiti inofanirwa kukurudzirwa kuti ienderere mberi nebasa rayo rakanaka rekutsvaga chokwadi panyaya yemangoda uye kugadzirisa zviri kuitika kwaMarange.